Pyramids of Giza, Egypt ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်တစ်ပါး အီဂျစ်ဂီဇာပိရမစ်ကြီးများ | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on January 14, 2017 January 14, 2017 by Nu Myat
ရှေးနှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ကျော်ကတည်းက အခိုင်အမာရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံဖွယ်ခုနှစ်ပါးထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဂီဇာပိရမစ်ကြီးတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ချင်တာကြာပါပြီ။ တိုက်ကြီးငါးတိုက်ထဲမှာ နောက်ဆုံးရောက်ဖို့ကျန်နေတဲ့ အာဖရိကတိုက်ကိုလည်း သွားချင်တာကြာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်အတွင်း Tour Diamond ရဲ့ အီဂျစ်ခရီးစဉ်နဲ့အတူ အီဂျစ်နိုင်ငံသို့တစ်ပတ်အကြာ သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပိရမစ်ဆိုတာ မျက်နှာစာ လေးဘက်ရှိပြီး အောက်ခြေကျယ်ကာ အပေါ်ထိပ်မှာ သွားစုသွားတဲ့အဆောက်အအုံပါ။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ပိရမစ်ပုံသဏ္ဏာန် အဆောက်အအုံတွေ များစွာ ရှိလို့နေပါတယ်။ ပိရမစ်ဆောက်လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပုံသဏ္ဏာန်တွေကတော့ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူကြဘူးပေါ့လေ။
အီဂျစ်နိုင်ငံကတော့ ပိရမစ်နဲ့ ကမ္ဘာကျော်သလို အီဂျစ်မှာပိရမစ်ပေါင်း ရာကျော်ရှိနေဆဲပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ပိရမစ်ကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အီဂျစ်ကတော့ ဖာရိုဘုရင်တွေ နတ်ရွာစံတဲ့အခါ မမ်မီပြုလုပ်ပြီး မြှုပ်နှံဖို့ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ သေပြီး တမလွန်ဘ၀မှာ သုံးဆောင်ဖို့ ပိုင်ဆိုင်သမျှ ရွှေငွေကျောက်သံပတ္တမြားတွေနဲ့ နေ့စဉ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပရိဘောဂတွေကိုပါ ခေါင်းတလားနဲ့အတူ ပိရမစ်ကြီးတွေထဲ တစ်ခါတည်း ထည့်မြှုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ နေနတ်ဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ ခေတ်မှာ နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ဖြာကျနေသလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရော နေမင်းဆီအရောက်တက်လှမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ ပိရမစ်ကြီးတွေကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ တချို့က ထင်မြင်ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးပိရမစ်ကတော့ BC 2650 နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ကျော်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆာကာရာ(Saqqara) အမည်ရှိ အဆင့်ဆင့်ဆောက်ထားတဲ့ အီဂျစ်ကပိရမစ်ကြီးပါ။ ကမ္ဘာမှာနာမည်အကျော်ဆုံး ပိရမစ်တွေကတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံဂီဇာမြို့က ပိရမစ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီဇာမြို့အနီးအနားမှာတင်ရှိပြီး ကျွန်မတို့မြို့ထဲဖြတ်တဲ့အခါ ဂီဇာမြို့ကနေ ပိရမစ်ကြီးတွေကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ လှမ်းကာမြင်နေရပါတယ်။။ ထုထည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသလို သားစဉ်မြေးဆက်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ပိရမစ်ကြီး သုံးခု အတန်းလိုက်ရှိနေတာကလည်း အံ့အားသင့်စရာပါ။
ပိရမစ်အကြောင်း ပြောပြထားတဲ့ Live Video Link လေးတွေပါ
အဲ့ထဲက အကြီးဆုံး ချီးယပ်စ်ပိရမစ်ကို အဖေဖြစ်သူ ခူဖူ(Khufu)ဘုရင်ကြီးက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၅၀၀ကျော်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ အမြင့်ပေ ၄၅၅ပေ (အထပ်၅၀မြင့်တဲ့တိုက်တစ်တိုက်စာ) ရှိပြီး အောက်ခြေအကျယ် ၇၅၅ပေ(တင်းနစ်ကွင်း အခု၂၀၀စာ) ရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၄၃၀၀ကျော်ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။ ၁၈၈၉ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့ရှိ အီဖယ်တာဝါကြီးက ပိုမြင့်လို့ ဒီချီယပ်စ်ပိရမစ်ကြီးကို ကျော်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် ဒီပိရမစ်ကြီးက မူလအမြင့်ပေ ၄၈၈ပေရှိခဲ့တာပါ။ ဒီပိရမစ်ကြီးကို ၂.၅တန်ကနေ ၁၅တန်အထိလေးတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေ အတုံးပေါင်း ၂သန်းကျော်နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားပေါင်း ၁၀၀၀၀ နဲ့ အနှစ် ၂၀ကျော်ကြာဆောက်လုပ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ဒီပိရမစ်ကြီး ၃ခုပေါင်းက ကျောက်တုံးတွေကို အမြင့် ၁၀ပေ ထု၁ပေရှိတဲ့ တံတိုင်းနံရံကြီး လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြင်သစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကို တံတိုင်းခတ်လို့ရတဲ့အထိ များပြားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျွန်မတို့အဲဒီ ကူဖူပိရမစ်ကြီးဆီ အရင်ရောက်ပါတယ်။ ကြီးမားမြင့်မားလှတဲ့ ပိရမစ်ကြီးကို မြင်တွေ့ရတာ ကိုယ့်မျက်စိကိုယ် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ အနားကပ်လေလေ ကြီးမားခိုင်ခံ့တဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေ တွေ့ရလေ ပိုအံ့သြလေပါ။ ရှေါ်နှစ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော်က ဒီကျောက်တုံးကြီးတွေကို ဘယ်လိုများသယ်ပြီး ဘယ်လို ဆောက်ခဲ့ပါလိမ့်ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေခေါင်းထဲ စီလာပါတယ်။
အလည်မှာ ရှိတာကတော့ သားဖြစ်သူ ခါဖရာ(Khafra)ဘုရင် ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပိရမစ်ကြီးပါ။ ဖခင်ရဲ့ ခူဖူပိရမစ်ထက် နိမ့်အောင် ဆောက်ရလို့ အမြင့်ပေ ၄၄၆ပေသာရှိပေမဲ့ ပိုမြင့်တဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်တက်ဆောက်ထားလို့ ခလယ်မှာ အမြင့်ဆုံး ပိရမစ်လို ဖြစ်နေတာပါ။ ပြီးတော့ ပိရမစ် မုခ်ဦးမှာ ထုထားတဲ့ Sphinx မဟာမနုသီဟရုပ်တုကြီးကလည်း ထည်ဝါပြီး နာမည်ကျော်လှပါတယ်။ အမြင့် ၆၅ပေ အရှည် ၂၄ပေရှိ ဒီ ရုပ်တုကြီးဟာ ဘုရင်ခေါင်း ခြင်္သေ့ကိုယ်နဲ့ ဖြစ်နေပြီး ပိရမစ်ကြီးကို စောင့်ရှောက်နေသယောင် ပိရမစ်ကြီးတွေနဲ့ အလွန်ပနံသင့်လှပါတယ်။ ဒီအရုပ်ကြီးတွေက ရှေးဟောင်းအီဂျစ်သာမက ခေတ်သစ်အီဂျစ်ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်နေဆဲပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မန်ကာရီ ပိရမစ်ကတော့ မြေးဖြစ်သူဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၁၆ပေသာမြင့်လို့ ဂီဇာ ပိရမစ်ကြီးတွေထဲ အသေးဆုံးပိရမစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိရမစ်သုံးခုဟာ နိုင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိပြီး တစ်ခုပေါ်တစ်ခု အရိပ်မထက်အောင် နေမကွယ်အောင် အရှေ့မြောက်ကနေ အနောက်တောင်လားရာအတိုင်း ဆောက်ထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိရမစ်ကြီးထဲ ၀င်ကြည့်ချင်ရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ဒေါ်လာထပ်ပေးရပါတယ်။ နုမြတ်လည်း ပိရမစ်တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ အကြီးဆုံး ခူဖူပိရမစ်ကြီးထဲ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မူလ၀င်ပေါက်က မြောက်ဘက်အရပ် အမြင့်ပေ ၁၆၄ပေအမြင့်မှာ ရှိပေမဲ့ တကယ်ဝင်ကြည့်ရတဲ့ အပေါက်က ဂူဖောက်သမားတွေ ဂူသူခိုးတွေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အပေါက်ပါ။ ပိရမစ်ထဲ ၀င်ရတာ Adventure တစ်မျိုးပါပဲ။ ကျွန်မ၀င်တဲ့ အချိန် အသွားလမ်းတလျှောက်လူတစ်ယောက်မှ ရှိမနေတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Thriller ကားထဲက Mummy ဇာတ်ကားတွေထဲက ဇာတ်ကောင်အလားခံစားမိပါရဲ့။ လျှို့ဝှက်ခလုတ်တွေနှိပ်မိပြီး လက်နက်ယန္တရားတွေထွက်လာမလား၊ ထောင်ချောက်တွေတက်နင်းမိပြီး ချောက်ထဲပြုတ်ကျသွားမလား၊ မမ်မီသရဲတွေနဲ့များတွေ့မလား ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ပေါ့…
တစ်ယောက်ထဲ လှိုဏ်ဂူလို လမ်းတွေဖြတ်၊ တစ်ယောက်စာသာကျယ်ပြီး ဆင်ခြေလျှောအတိုင်းတက်ရတဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ကုန်းကုန်းကွကွဖြတ်ကျော်အပြီးမှာ Grand Galley လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာကျက်အမြင့်ကြီးရှိတဲ့ ဆင်ခြေလျှောလမ်းဆီရောက်ပါတယ်။ ၂၈ပေနီးပါးအမြင့် ရှိပြီး ၁၅၇ပေရှည်တဲ့ ဒီလမ်းကြီးဟာ အင်မတန်ခမ်းနားပါတယ်။ အဲ့လမ်းအဆုံးမှာ ဘုရင် အုတ်ဂူထည့်ထားရာ အခန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဂူဖောက်သမားတွေကြောင့် အခန်းထဲရော လမ်းတလျှောက်မှာ ဘာပစ္စည်းမှ ရှိမနေတော့ပါဘူး။ ပစ္စည်းတွေပါရှိနေရင် ဘယ်လောက်များ ခမ်းနားလိမ့်မလဲ တွေးမှတ်မိပါရဲ့။ နောက်ပြီး ဒီလောက်ကြီးမားခမ်းနားတဲ့ ပိရမစ်ကြီးထဲမှာ ပဲ့နေတဲ့ အဖုံးပွင့်ကျောက်ထွင်းခေါင်းတစ်ခုသာ တွေ့ရတာကိုလည်း ဘ၀င်မကျမိပါဘူး။ ကျွန်မမှန်းထားတာက Mummy ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ရတနာတွေအပြည့် ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့၊ လျှို့ဝှက်ယန္တရားတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့၊ လမ်းတလျှောက် ကြောက်စရာ နတ်ဘုရားရုပ်တုကြီးတွေ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိနေတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးကို မျှော်လင့်ခဲ့တာကိုး… ခုကျတော့ မှောင်မှောင်မဲမဲ မျက်နှာကျက်မြင့်မြင့် အခန်းထဲ ပဲ့နေတဲ့ ကျောက်အခေါင်းလေးတစ်ခုသာ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ လမ်းတလျှောက်မှာ တခြားလမ်းခွဲတွေ ပိတ်ထားတာတွေ့ရပြီး အဲ့လမ်းကသွားရင် မိဖုရားခေါင်ကြီးရဲ့ အုတ်ဂူမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပိရမစ်ထဲ ၀င်ကြည့်ထားတဲ့ Video File က ဒီမှာပါ
ပိရမစ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အနီးအနားမှာ မိဖုရားတွေအတွက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပိရမစ်အသေးလေးတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အကြီးဆုံး ခူဖူပိရမစ်ကြီးရဲ့ ပတ်လည်မှာ နိုင်းမြစ်တလျှောက်ဘုရင်ကြီး ရုပ်အလောင်းကို သယ်လာခဲ့တဲ့ ဘုရင်ကြီး ဈာပနာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀အကြာက ရှေးဟောင်းရွက်လှေကြီးကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကူးဖူးဘုရင်ပိရမစ်ကြီးကနေ သဲကန္တာရဘက် ခပ်လှမ်းလှမ်းသွားရင် ပိရမစ်ကြီး ၃ခုစလုံး မြင်ရတဲ့ View Point ရောက်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့ မြင်းလှည်းစီးပြီး သွားကြပါတယ်။ အဲ့ View point မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေကတော့ အများကြီးပေါ့၊ ပိရမစ်ကြီးတွေကို လက်ပေါ်တင်ရိုက်တာတို့ ပိရမစ်ထိပ်ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆွဲယူသလို ရိုက်တာတို့ ပို့စ်အမျိုးမျိုး အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့။ သဲကန္တာရဆိုတော့ လေတော့ထန်တယ်။ အဲ့မှာ ကုလားအုတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရသလို ကုလားအုပ်စီးလို့လည်းရတယ်။ ပိရမစ်ကြီးနောက်ခံထားပြီး ကုလားအုပ်စီးရတာ တကယ်ပျော်စရာပါ။ ကုလားအုပ်ကြီးက အမြင့်ကြီး။ သူ့နာမည်က မိုက်ကယ်တဲ့။ နားထင်နားမှာ Mစာလုံးတောင် ရှိတ်ထိုးထားလိုက်သေး။ မိုက်ကယ်တို့ ခေတ်မီပုံက …
မိုက်ကယ်နဲ့ကျွန်မကို သူ့သခင်အီဂျစ်ကြီးက လူအုပ်နဲ့ဝေးရာ ဆွဲခေါ်ရာနောက်ကိုလိုက်ရင်း ပိရမစ်ကြီးတွေနောက်ခံနဲ့ ကန္တာရထဲ တရွေ့ရွေ့သွားနေရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ကမ္ဘာထဲ ရောက်သွားသလိုလို ခံစားချက်က အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ အီဂျစ်ရောက်ဖြစ်ရင် ကုလားအုပ် စီးဖြစ်အောင်စီးကြပါ။
ကုလားအုတ်စီး Live Video Link လေးပါ
အီဂျစ်ကပိရမစ်ကြီးတွေဟာ ဖာရိုဘုရင်တို့ရဲ့ သချိုင်းဂူသက်သက်သာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မပျက်မစီးဘဲ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေနိုင်တာကြောင့် လူတို့ရဲ့ စွမ်းအားကို ပြနေတဲ့ ပြယုဂ်ကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလောက်လေးလံတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေအထပ်ထပ် ထပ်ကာ အမြင့်ကြီး ဆောက်နိုင်တာလည်း ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ရှေးခေတ်ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာတွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ အယူဝါဒတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှလို့ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်အဆောက်အအုံကြီးတွေထဲ ထိပ်ဆုံးက နှစ်ပေါင်းများစွာ နေရာယူခဲ့နိုင်တာလည်း မဆန်းပါဘူးလေ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အီဂျစ်ပိရမစ်ကြီးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားလေ့လာချင်ပါက နုမြတ်သွားခဲ့တဲ့ Tour Diamond ကနေ အီဂျစ်သီးသန့်ခရီးစဉ်တွေ သွားပေးနေတာကြောင့် ဒီ Link ကနေ တဆင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေ၊ မမ်မီတွေအကြောင်းနဲ့ တခြားအီဂျစ်က စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကို နောက်အပိုင်းတွေမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Nu Myat around the World page ကို like လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Post ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားရင် Like နဲ့ Share လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင့်။
This entry was posted in Adventure, Africa, Myanmar, Uncategorized and tagged Africa, Egypt, Giza, Pyramids, Travel. Bookmark the permalink.
← Fairy Tale Land of Vietnam, Bana Hills
Collection of my Travel Talks on MRTV4 →